2018 Volkswagen Atlas Chọta Dashboard 12.3-Inch Screen Protector 2018 Volkswagen Atlas Discover Dashboard 12.3-Inch Screen Protector - LFOTPP
Home ngwaahịa 2018 Volkswagen Atlas Chọta Dashboard 12.3-Inch Screen Protector
2018 Volkswagen Atlas Chọta Dashboard 12.3-Inch Screen Protector
♠ 9H Glass Tempered: Chebe ihuenyo gị site na Icha, Ọgbawa na Debris;
◯ Ibelata ike gị;
Ike nke ngwaahịa:
Teknụzụ na-agbachitere otutu: iko a rụkọtara ọnụ maka okpukpu abụọ nke ike dị ka usoro ndị ọzọ na-abụghị iwe ọkụ na nguzogide dị mma megide ịchafụ na mkpịsị aka aka.
Ahụhụ HD & Ezigbo aka, dị nfe, dị ọcha hichaa.
Ihe nlere anya doro anya. Ingwụnye mkpuchi ihuenyo agaghị emetụta ụcha, nha akara ngosi na ikike ihuenyo mmetụ nke ngosipụta GPS gị. Ọ ga - eme ka ọ ghara ichebe ya pụọ ​​n’ájá, ahịhịa, mmanụ na mmiri wdg.
Nwee obi ụtọ ịbịachi Hassle. Iji mee ka onye na-ahụ maka ihuenyo GPS gị doo anya ma ghara ịnwe ntụ, kpochapụ ya na ngwa microfiber. Enweghị mkpa iji ihe nhicha dị ọcha.
Akpaaka adsorption ọrụ
Site na ọrụ mgbasa ozi, nkuku anọ nwere ike itinye aka na mgbasa ozi, enweghị ọgbọ
Naanị mgbe a kpochapụrụ ihuenyo, dozie ya ma tinye ya.
Gbasaa site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ, enwere ike ibudata ya na-akpaghị aka na-enweghị nsị.
Ogbugba okpomoku 85 °, obere ihe mgbochi nke obere ihe a na-agbakwunye 30 °
Ngwaahịa ndị a dị n'elu ga-adaba maka ihe nkiri ekwentị mkpanaka, ihe nkiri vidiyo silk, ihe nkiri 4D.
2016 2017 2018 VW Volkswagen Golf 7 Facelift GTI / GTE / GTD / Golf R / Golf Variant 9.2-inch Display Screen Protector
2017 2018 2019 Polo 8-Inch Screen Protector
2017-2019 Volkswagen T-Roc 8-inch Display Protector Screen (Mmiri na-acha anụnụ anụnụ)
si $ 12.99 $ 15.98
ọrụ Egwuregwu Blue-ìhè Mmiri na-agba agba